Operation – Vision to Motion
SME ဆိုတာနဲ့ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Small and Medium Business) သို့မဟုတ် Enterprise ပါဘဲ၊၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးထိပ်သီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်တို့ ဂျပန်တို့မှာတောင် SME လုပ်ငန်းတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံကုမ္ပဏီစုစုပေါင်းအရေအတွက်ရဲ့ ၉၉.၉% နဲ့ ၉၉.၇ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိပြီး၊ တမျိုးသားလုံးထုတ်ကုန် GDP ရဲ့ တဝက်ခန့်ကို တိုင်းပြည်အတွက် ဝင်ငွေရစေပြီး၊ ၎င်းတို့ တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်လုပ်သူ အားလုံးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကို အလုပ်အကိုင်ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့လို့ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍဆိုရင် မမှားပါဘူး။
စီးပွားရေးအမျိုးအစားကွာခြားပေမဲ့ SME အများစုရဲ့ တူညီတဲ့အချက်က ငွေအရင်းအနှီးနဲ့ ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ် တွေအကန့်အသတ်ရှိကြပါတယ်။ ကြိုးစားမှုကြောင့် ဖေါက်သည်နဲ့ ဝယ်လိုအားတိုးများလာရင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ချက်ခြင်းတိုးမြင့်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲပေါင်းစုံ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုသာ အားကိုးရပြီး စနစ်မရှိလို့ နောက်လူက လိုက်မလုပ်တတ်တာကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်လို့ အလုပ်မလာရင်ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ထွက်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် ကျန်လူတွေက ဝင်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲရပါတယ်။ အများစုမှာ ကုန်မှားပို့မိလို့၊ စာရင်းမနိုင်လို့၊ ငွေမသိမ်းမိတာတို့၊ ကုန်လက်ကျန်ချက်ချင်းမသိလို့ ကြိုမမှာမိတာတို့၊ အခွင့်အလမ်းတိုးရှာဖို့ လမ်းကြောင်းမရှိတာတို့၊ မလိုအပ်ဘဲ စရိတ်တက်နေတာတို့၊ ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေး မထိန်းနိုင်တာတို့၊ ဖေါက်သည်ရဲ့ ဝယ်ယူပုံစံကို ခန့်မှန်းချက်လွှဲတာတို့ စတဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း အနည်းနဲ့အများ ကြုံနေကြရပါတယ်။
SME လုပ်ငန်းများအောင်မြင်အောင် နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ဘာတွေကို ဖြေရှင်းပြီး ဆောင်ရွက်လိုက်ရင် ဘယ်လိုအဆင်ပြေတိုးတက်လာမယ်ကို အဓိကထားဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စေမဲ့ နည်းပညာ စနစ်တွေကိုသိရှိဖို့၊ ဒီစနစ်တွေရဲ့ အသုံးပြုပုံနဲ့ အကျိုးရှိပုံကို သိရှိဖို့နဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက် ကွာခြားပုံကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမယ်။
Vision to Motion, help you realised your dream and Leading Digital Transformation. We provide ICT solutions in the field of Connectivity, Computing, Security & Data Science. Leverage your business by partner with us to haveahigh performance ICT infrastructure and achieve your business vision.
ကုန်ပစ္စည်းထိန်း Inventory Management စနစ်
Application CRM ERP Inventory moodle Operation Sales SME
Copyright 2021 Vision to Motion.
www.v2m.jp / email, contact detail
Vision to Motion, help you realised your dream and Leading Digital Transformation. We provide ICT solutions in the field of Connectivity, Computing, Security & Data Science.